"Saaxiibkey, Xildhibaan Cali Malable Waxaan Leeyahay; Hadii Aanad Adigu Ogaal Ulaheyn, Ciddi Codka Ku Siiyey Iyo Xisbigaagii, Gudoomiye Cabdirisaq Waa Yaqaannaa Dadkiisa Iyo Ciddii Dooratayba"Xil Barkhad.
Wednesday November 24, 2021 - 01:50:02 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(xogreeb.com)-Xildhibaan Barkhad Batuun oo jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay Xildhibaan Cali Qaran ayaa yidhi:-
Saaxiibkay xildhibaan cali malable waxaan leeyahay;
Guddoomiye Cabdirisaaq Khaliif Axmed muddadii koobnayd ee uu golaheena hoggaaminayay waxa uu gaadhsiiyey guulo wax ku ool ah. Waxa ka mid ah: dhismaha guddi hoosaadyo, dhammaystirka xeerka golaha, dhismaha iyo dayactirka xarunta golaha, tayaynta shaqaalaha goolaha, tabobarida xildhibaanada goolaha, soo kordhinta lataliyayaal khuburo ku ah sharciga, dhaqaalaha, afka, iyo Xidhiidhka baarlamaanada caalamka.
Dabci uma laha aargoosi iyo uurxumo. Waxa uu muddadaas muujiyey odeynimo iyo isku haynta gole waynaha, waxaas’e layaab leh cidda canaan iyo cay uga dhigaysa bulsho abaal ku leh Cabdirisaaq sidee ayuu ugu mahadceliyey? Haddii aanad adigu ogaal u laheyn ciddi codka ku siiyey iyo xisbigaagii, Cabdirisaq waa yaqaannaa dadkiisa iyo ciddi dooratayba.
Golawaynaha ayaa laga tilmaami kara lagana toosin kara haddii khalad u galo guddoomiyihu, laakiin in saxaafadda laga canaanto waxa aan waxba aheyna cay looga dhiga waxa ka dhalanaysa anshaxmarin. Xeerka goolaha iyo xurmada xildhibaannino waa in aynu dhowrnaa.”